Yeka Ukubheja, Masitshale Amathuba | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 13, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Abantu baseMelika bayakuzonda ukulahlekelwa yimpi, isikhathi. Ngombono owodwa, imboni yezimoto efayo iyimpi esicabanga ukuthi siyayilahla. Angikholwa ukuthi silahlekelwa yilutho, ngikholwa ukuthi siyathuthuka. Imisebenzi ethuthela phesheya kwezilwandle ihlala izwakala iyisabekayo, kepha abantu bahlala bekushaya indiva ukuthi sidala imisebenzi emisha khona lapha kulesi sizwe engakaze izwakale phambilini.
Nginguye isibonelo esiphilayo salokhu. Ngisanda kuphuma eMbuthweni Wezempi, umsebenzi wami wokuqala kwakuwukusebenza ngogesi ezimbonini ephephandabeni. Ngahlala embonini yamaphephandaba iminyaka eyishumi ngaphambi kokuba ngixoshwe, futhi ngiyajabula kuze kube phakade. Kazi bekuzokwenzekani ukube abaphathi bami bebekhona kuphume ngebheyili futhi angidingi ukushintsha. Ngabe ngisazohlupheka embonini efayo?
Hlola Isikhundla seSocial Media Manager kuvulwe lapho HP. Bafuna umuntu onerekhodi lokubloga eliqinisekisiwe, ulwazi lwe Wikis futhi Twitter. Bafuna ukuguqula ulwazi lwalowo muntu futhi bathuthukise Izinkomba Zokwenza Okusemqoka ukuze ibhizinisi liqaphe isu labo lezokuxhumana.
Ukukhiqizwa kwamakhompiyutha kwasuswa olwandle eminyakeni eminingi eyedlule… ngabe abafana abaphelelwa yimisebenzi phesheya kwezilwandle bafuna ukunikezwa okuvela kuHulumeni wase-US? Cha, basusa inkomba futhi baguqula amathalenta abo ekwakhiweni nasekukhiqizeni futhi bakudlulisela kokuqalisa kwamabhizinisi nokukhalipha kwi-Intanethi.
Uma isizwe sakithi (kanye nabanye) befisa ukuhlala behamba phambili kwezobuchwepheshe bokusebenzisa amandla, kuzodingeka ukuthi sihlale sibheke ekusaseni. Sesizenzile izimoto vele… kuhlole ohlwini bese ukuvumela ukuthi kudlulele ezweni elilambele ukulithatha. Okwamanje, abasebenzi bethu bezimboni zezimoto kufanele babheke inselelo elandelayo njengobunjiniyela nokwakha eminye imithombo yamandla.
Kubathengisi bezikole ze-ol, sekuyisikhathi sokuqhubekela phambili bantu! Qala ukuzifundisa wena namakhasimende akho ethubeni elilandelayo - ukubhuloga, ukuphathwa kwedumela kanye nemithombo yezokuxhumana kulapha - akuseduze. Sekuyisikhathi sokwenza ushintsho, ngaphambi kokuthi uzithole usulayini ucela ukutakulwa.
Kwinothi eliseceleni, i-kudos eya ku-HP ngokulindela isidingo sokwenza isu langaphakathi lezokuxhumana!
Mangaki Amagama Ngokuthunyelwe okulungile?
Nov 14, 2008 ngo-12: 50 PM
Angikwazanga ukuvuma okuningi. Kubukeka sengathi ezinye izindawo / abantu abafuni ukushintsha nokuzivumelanisa nezimo njengoba umphakathi wethu uguquka ngobuchwepheshe. Ngicabanga ukuthi i-Indiana iyisibonelo esihle salokho, iningi lezinhlelo zikahulumeni zigxile ekugcineni nasekuvuleni imisebenzi yokukhiqiza, kuyilapho bengakunaki ukuthi kungenzeka ukuthi i-Indiana ibe yindawo yokuthuthuka kwezobuchwepheshe.
Nov 14, 2008 ngo-3: 30 PM
Beka kahle uDoug - ayikho indlela engcono yokuvimba ubuqambi namasu amasha kunokuklomelisa ukwehla kwezimakethe (kungasaphathwa izinqumo ezimbi zebhizinisi) ngokunikezwa nguhulumeni.